Umeerin Tonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Tababbarka Tonka wuxuu ku furi doonaa ilmahaaga kartidiisa buuxda iyadoo loo marayo hal-hal, tilmaamid shaqsiyeed. Marka la aqoonsado baahida shaqsiyeed ee arday kasta, macallimiinteena gaarka loo leeyahay waxay awoodaan inay bixiyaan adeegyo umeerin loogu talagalay oo la jaan qaadaya manhajka Degmada. Haddii ilmahaagu dhigto dugsiga hoose, dhexe ama sare, Tonka Tonka wuxuu abuuri doonaa istiraatiijiyad waxbarasho oo shaqsiyeed si looga caawiyo ardayda inay bartaan shaqadooda aqooneed, inay horumariyaan kalsoonidooda ayna sare u qaadaan heerkooda guusha. Tutor-ka Tonka, waxaan aaminsanahay is-dhexgalka qof-qof in uu la yeesho macallin siiya ardayda:
Istaraatijiyadaha abaabulka iyo u kala qaadida shaqada iskuulka qaybo la maareyn karo.
Cadeynta macluumaadka si khaldan loo tarjumay ama loogu fahmay fasal weyn.
La xisaabtanka oo sare u qaada mas'uuliyadda isla markaana yareeya dib-u-dhigga.
U-doode taageero iyo lataliye si uu uga caawiyo dhisidda kalsoonida iyo madax-bannaanida.
Macallimiin xirfadlayaal ah
Inta badan macallimiinteennu waa macallimiin ruqsad haysta oo sannado badan u keenaya barnaamijka qibrad. Macallimiinteennu waxay kaloo aqoon durugsan u leeyihiin Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxayna la jaan qaadaan barnaamijyada umeerinta manhajka degmada. Macallimiinteennu waxay ku faanaan fiiro gaar ahaaneed oo la siiyay arday kasta waxayna siiyaan dhiirigelin, dhiirigelin iyo isdhexgal wanaagsan.
Goobaha ku habboon
Adeegyada umeerintu waxay ka dhacaan iskuul kasta oo Minnetonka ah. Waxaan aaminsanahay in dugsiyadeena ay bixiyaan jawi waxbarasho oo nabdoon, oo caan ah oo loogu talagalay carruurta inay diirada saaraan guusha tacliinta.
Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir Tonka.Tutoring@minnetonkaschools.org
Taageerada Tacliinta xagaaga
Barnaamijyadeenna xagaaga waxay ardayda ku dhiirrigeliyaan inay sii wataan barashada bilaha xagaaga, iyagoo gacan ka geysanaya u-gudubka fasalka ku xiga in yar oo fudud. Kuwo badan ayaa soo bandhiga agab waxbarasho oo loo soo diro gurigaaga si loo qabto xagaaga oo dhan, isla waqtigaaga. Haddii tilmaanta fasalka adiga laguugu talagalay, waxaan bixinnaa Jumpstart Math & Reading. Ama mid ka mid ah waxbarid ayaa laga heli karaa umeerin Tonka .
Diyaarinta Imtixaanka Tacliinta
Waxbarashada Beesha ee Minnetonka waxay ka taageertaa ardayda hadafyadooda ah inay sii wataan waxbarashad iyadoo la siinayo fasallo u diyaargarow ah oo loogu talagalay ACT. Fasallo kala duwan ayaa la bixiyaa sanadka oo dhan si looga caawiyo ardayda inay gaaraan himilooyinkooda.
A CT Prep
Maamulaha Barnaamijka Tayeynta Dhalinyarada